अब को होला प्रधानन्यायधिश ? यी हुन् दौड्मा रहेका वरिष्ठ न्यायधिशहरु - Nayapul Online
अब को होला प्रधानन्यायधिश ? यी हुन् दौड्मा रहेका वरिष्ठ न्यायधिशहरु
प्रकाशित मिति : Friday, August 3, 2018 nayapulonline
साउन १८, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको दुई तिहाईले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायधिशमा स्वीकृत नगरेपछि अव को होलान त नयाँ प्रधानन्यायधिश भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ । वरिष्ठताका आधार आमेप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शम्सेर जबरा र दीपक कुमार कार्की अव प्रधानन्याधिशको दौड्मा छन् ।
यी हुन् वरिष्ठतम न्यायधिशहरु :
वरिष्ठ न्यायधिश आमेप्रकाश मिश्रको स्थायी घर रुपन्देही हो । सन् १९५४ मा जन्मिएका मिश्रले दिल्लीबाट एमसिएलसम्मको अध्ययन गरेका छन् । सन् १९८१ मा अधिकृत भएर कानुन मन्त्रालय छिरेका मिश्र २०१४ मा सर्वोच्चका न्यायधिश भएका थिए ।
चोलेन्द्र शम्सेर जबरा
सन् १९५७ मा जन्मिएका वरिष्ठ न्यायधिश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा काठमाडौंका स्थायी बासिन्दा हुन् । सन् १९९६ मा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका चोलेन्द्र २०१४ मा सर्वोच्चका न्यायधिश बनेका थिए । विवादित बनेपछि गोपाल पराजुलीले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्नेमा उनी पनि थिए ।
दीपक कुमार कार्की
दीपक कुमार कार्कीको प्रधानन्यायधिश बन्ने सम्भावना कम भएपनि बिगतको विगत हेर्दा उनी पनि दौडमै सामेल छन् । सन् १९५७ मा काठमाडौंमा जन्मिएका कार्की १९८० मा अधिकृतको रुपमा सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सन् २०१६ मा कार्की सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश बनेका थिए ।
किन निरन्तर विवादित बन्छन् प्रधानन्याधिश ?
रुसद्धारा सिरियामा भइरहेको द्वन्द्वका लागि ६३ हजार सेना
फाष्ट ट्रयाक डिपीआर तयार गर्न कोरियाली परामर्शदाता